Sehatra famoahana talenta vao :: Hitily an’ireo mpanakanto vao misondrotra ny « Libertalia » • AoRaha
Sehatra famoahana talenta vao Hitily an’ireo mpanakanto vao misondrotra ny « Libertalia »
Hiditra amin’ny andiany fahaenina, amin’ity taona ity, ny “Festival Libertalia” na sehatra natao hitiliana sy hanomezana tosika an’ireo matihanina amin’ny fiangaliana zavakanto miompana amin’ny mozika. Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo mpanakanto maniry ny hampahafantatra ny talentany.
Malalaka amin’ny aingam-panahiny, toy ny isan-taona, ireo te handray anjara amin’ny hetsika. Tsy voafetra ny karazan-kira voizin-dry zareo saingy handrasan’ny mpikarakara kokoa ireo fampifangaroana gadon-kira maroloko. Takiana kosa ny fizakana ny zom-pirenena malagasy.
Mila mandefa rakipeo telo sy rakitsary an-tsehatra roa, miampy sary telo, ny tsirairay, miaraka amin’ny lahatsoratra mampahafantatra ny tanjozotra naharahany amin’ny alalan’ny mailaka libertalia@gmail.com. Handalo dingana roa ny fisafidianana an’ireo mpandray anjara. Hatomboka amin’ny fandinihana ny mombamomba azy ireo ny sivana. Aorian’izay no hisian’ny sedra eny an-tsehatra.
Varavarana misokatra ho an’ny mpanakanto malagasy amin’ny fanehoana ny fahaiza-manaony ny “Libertalia”. Maro ny mpamokatra sy mpikarakara arista na tarika, eo sehatra iraisam-pirenena, no tonga manotrona an’io lanonana io isan-taona. Tsiahivina fa anisan’ny aritsta efa nisongadina tamin’ity hetsika ity ry Tsiliva sy Samoëla ary ry Dizzy Brains.
Fiarovan’ny covid-19 Mahomby ny ady amin’ny valanaretina any Fianarantsoa
Fankalazana andro manokana :: Fikambanana maromaro hanandratra ny Teny malagasy